News Collection: राजवल्लभ गर्छन् केकीलाई मिस
राजवल्लभ गर्छन् केकीलाई मिस
'स्वर'को अनस्क्रिनमा त हिरो राजवल्लभ र हिरोइन केकीले रोमान्स नै गरे । जतिबेला यो जोडी एकअर्कालाई खुबै मिस पनि गथ्र्यो । सिनेमा प्रमोसनका दौरान पनि दुवै सँगैदेखिन थालेको छ । सोसल साइट फेसबुकमा पछिल्लो समय राजवल्लभका फ्यानहरु प्रश्न गर्न थालेका छन् -के राजवल्लभ केकीलाई खुबै मिस गर्छन् ? राजवल्लभले हाँसेर मात्र डिप्लोम्याटिक जवाफ दिए ।
'स्वर'को रिलिज नजिकिँदै गर्दा राजवल्लभ र केकीबीचको 'सम्बन्ध (?)' लाई लिएर सोसल साइटका भित्ताहरु उज्यालिन थालेका छन् । यो मामिलामा राजवल्लभ खुलेर बोल्न चाहँदैनन् तर उनका प्रत्येक रिप्लाइहरु कुटनीतिक लाग्छन् । नेपाली उखान छ -मौनताले स्वीकारेको संकेत गर्छ । राजवल्लभ पनि आफ्ना फ्यानहरुको जिज्ञासामा हाँसेर मात्र मौन जवाफ दिन्छन् । के उनले केकीलाई मिस गरेको हरियोझन्डा देखाएका हुन् ? उनी नै जानून ।
जसले जेसुकै अर्थ लगाएपनि 'स्वर'को अनस्क्रिन जोडी अफस्क्रिनमा पनि एकअर्कालाई उत्तिकै मिस गर्छन् । हाम्री केकी पनि कहाँ कम् छिन र फ्यानहरुलाई उनले 'एस' भनेर बताइदिइन् ।